Ahoana ny fomba fanaovana takelaka lamba ho an'ny fandriana | Bezzia
Toñy Torres | 14/10/2021 10:00 | Ataovy ny tenanao
Ny fanaingoana ny lamba amin'ny lamba no fomba tsara indrindra hitondra hafanana sy hafanana amin'ny efitrano rehetra. Mamela anao mihitsy aza ny fahafaha-manavao ny haingon-trano mora foana, miaraka amin'ny fanovana kely vitsivitsy ary fampiasam-bola farany ambany ara-toekarena. Satria tsy mila ho mpanjaitra mahay ianao, na hanana fitaovana tsara fanjairana, satria ankehitriny dia misy safidy hafa mahasoa indrindra hamoronana karazana singa rehetra miaraka amin'ny lamba.
Amin'ity tranga ity dia hamorona takelaka lamba ho an'ny farafara isika, singa haingon-trano izay tena ilaina koa. Rehefa te handany fotoana hamakiana alohan'ny hatory ianao na raha te-handry hijerena fahitalavitra dia tsy mila manana cushion bebe kokoa ianao. Satria hanampy anao ny headboard anao mandry fa tsy mila mandehandeha mametraka ny cushions avy eo. Tena azo ampiharina, haingon-trano ary mora atao roa amin'ny iray.
1 Ahoana ny fomba fanaovana headboard lamba
1.1 Fitaovana ilaina
1.2 Dingana ahafahana mamorona takelaka lamba vita amin'ny tanana
Ahoana ny fomba fanaovana headboard lamba
Ny fomba mora indrindra amin'ny famoronana lohany lamba dia ny fananana milina fanjairana. Izy io dia seam tena tsotra izay azonao atao na dia tsy mpanjaitra mahay aza ianao. KOA afaka mahazo milina fanjairana am-pelatanana ianao, fitaovana tsy dia lafo loatra izay ahafahanao manamboatra fandaminana kely sy mamorona zavatra tsotra toa izao.
Farany, manana safidy foana ianao manjaitra amin'ny tanana. Na dia tsy hitovy aza ny vokatra azo tamin'ny fanjairana masinina, Mbola asa vita amin'ny asa tanana izy io ary ny fahasamihafana misy eo no hampiavaka azy. Amin'ny fanjaitra tena izy sy faharetana be dia be, azonao atao ny mamorona takelaka lamba natokana ho anao manokana.
Voalohany dia tsy maintsy refesintsika ny rindrina mba handrefesana ireo fandrefesana ilaina amin'ny fitaovana. Amin'ny ankapobeny, ny takelaka dia tokony hitovy refy amin'ny fandriana na sentimetatra vitsivitsy kokoa, na dia singa vita tanana vita tanteraka aza dia azonao atao ny mifidy ny refy tadiavinao. Ho an'ny fandriana tokana, ny zavatra mety indrindra dia ny fanaovana unus iray ho loha-lohany. Rehefa eo am-pandriana lehibe dia afaka misafidy isika amin'ny fanaovana iray na roa.
Ho an'ny fandriana 90 santimetatra ireo no fitaovana ilaintsika.
Lamba rongony, miaraka amin'ny vatana sy ny fanoherana haharitra ela. Ny refy farany dia 1 metatra ny sakany ary 80 sentimetatra ny haavony. Noho izany dia mila lamba 1,20 santimetatra ny sakany roa amin'ny haavony 1 metatra isika, ireo fandrefesana ireo dia mitaky ny tambin-karama.
Savony fanjaitra na marika.
Fanjaitra sy kofehy na milina fanjairana.
Tsorakazo ny refy ilaina ary ny sasany manohana ny vatofantsika amin'ny rindrina.
Fenoy fibre ho an'ny ondana.
4 botones lehibe.
Dingana ahafahana mamorona takelaka lamba vita amin'ny tanana
Voalohany aloha dia handrefy ny fandrefesana ny lamba isika. Manamboatra mahitsizoro miaraka amin'ny fandrefesana marina izahay ary misy iray hafa manodidina ny 5 santimetatra eo ho eo ny sisiny. Izany dia hanampy antsika rehefa manjaitra raha tsy dia manam-pahaizana manokana momba ireo raharaha ireo isika.
Notapahinay ny lamba tamin'ny ny sisiny ivelany.
Alohan'ny hidirana amin'ireo sombin-javatra alehantsika farano amin'ny sisin'ny rahona ny sisin'ny lambaAmin'izany no hanakanantsika azy ireo tsy hilentika.
Ankehitriny isika dia hamorona sisin-tany amin'ny iray amin'ireo sisin'ny sakany, manome antoka fa tena tsara tarehy izy ireo.
Manohy manjaitra ireo lamba izahay, noho izany atrehinay izy ireo ary manjaitra amin'ny sisiny 3 sisa. Miala amin'ny ampahany izay nanaovantsika ny sisiny fa tsy nanatevin-daharana.
Avadintsika io ary ampitaintsika ilay lovia amin'ny alàlan'ny seams mba ho malama tsara.
Ankehitriny dia hamorona tadivavarana fehikibo isika, amin'ity tranga ity dia mila 4 isika handrefesana iray metatra ny sakany. Ny refy dia 20 santimetatra ny lavany ary 8 ny sakany. Miala amin'ny tambin-karama, manapaka ny sombin-damba izahay, nanaloka ny sisiny izahay ary nanjaitra ireo sanganasa mifanohitra, ary namela ny ilany iray tsy namboarina. Ahodinay ilay sombin-javatra, ampandalovintsika ny lovia ary hanjaitra ny lafiny tsy hita.
Mba hamita ny tadivavarana andao hanao bokotra kely, azonao atao ny mampiasa ny milina fanjairanao na manamboatra azy ireo amin'ny tanana.
Apetrakay eo amin'ny lamba ny tadivavarana Hahafantatra hoe aiza no hametrahana ny bokotra, alao antoka fa mitovy ny halaviran'izy rehetra.
ankehitriny manjaitra ny bokotra izahay ao anaty valopy lamba.
Manjaitra ny tadivavarana izahay amin'ny iray amin'ny sisiny mankany aorian'ny lamosin'ny lamba.
Mihidy amin'ny bokotra izahay ary mameno ny takelaka amin'ny fibre izahay ho an'ny ondana.
Efa manana ny takelaka vita amin'ny lamba isika, tsy maintsy apetrantsika eo amin'ny rindrina fotsiny ireo tohana ho an'ny tehina lamba. Ampidiro ny tadim-baravarana amin'ny tadivavarana ary apetraho eo am-pandrianao. Amin'ny tolakandron'ny fanjairana dia ho vonona ny takelaka vaovao hanome rivotra hafa ny efitranonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Ataovy ny tenanao » Ahoana ny fomba fanaovana takelaka lamba ho an'ny fandriana